zim: Top Zimbabwe News - NewsHub
1-10 results from 1000 for query «zim»
Diaspora-based Taffy Theman has lamented the suffering being experienced by Zimbabweans in a song titled Oneday. The song reflects on the troubles currently obtaining in Zimbabwe while also going back to Gukurahundi, Murambatsvina, the 2008 election violence where some women were raped, corruption, mismanagement of resources, and the recent army killings 73
South African police early today arrested the driver of an Intercape bus which killed nine Zimbabweans, among them a toddler, in a road accident near Polokwane on Friday last week. Limpopo police spokesperson Colonel Moatshe Ngoepe said the man disappeared from a hospital in Polokwane at the weekend but was intercepted at Beitbridge border post by alert 55
Former Highfield legislator Psychology Maziwisa and former ZBC News anchor Oscar Pambuka have both been found guilty of fraud and sentenced to 54 months in prison. The two duped Zimbabwe Power Company (ZPC) of over $12 000 after claiming to have done publicity work for the company. Maziwisa and Pambuka claimed to have done publicity work for ZPC during 51